Nanambara hotely voalohany tao Washington DC ny CitizenM
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nanambara hotely voalohany tao Washington DC ny CitizenM
Orinasa fomba fiaina sy hotely holandey, olom-pirenenaM nanambara fa mitondra 'haitraitra mora vidy' ho an'ny renivohitr'i Amerika. Ny marika dia haingam-pandeha amin'ny fanitarana fatratra manerana an'i Etazonia: ny olom-pirenena Washington DC Capitol no trano fandraisam-bahiny amerikanina fahadimy ary ny toerana fahefatra atsinanana dia misy ny roa any New York ary ny iray any Boston.
Nanomboka tamin'ny taona 2008, nanetsiketsika ny indostrian'ny fandraisam-bahiny nentim-paharazana ny citizenM miaraka amina fomba mavitrika, zavakanto matanjaka, haitao mahavariana ary serivisy fitiavam-bona fide. Ireo mpandeha maoderina ankehitriny dia te-hijanona amin'ny toerana an-tanàn-dehibe, mifandray tsara - ary ny olom-pirenenaM Washington DC Capitol no manatitra. Eo amin'ny fihaonan'ny reniranon'i Potomac sy Anacostia ao an-tanàna no mifanila mivantana amin'ilay National Mall malaza sy tranombakoka Smithsonian maromaro. Ao anatin'ny sakana roa amin'ny hotely no misy ny L'Enfant Plaza, foibe fitaterana an-tariby miaraka amin'ny fidirana amin'ny Metro. Tsy mila mandeha lavitra ny Jetsetters satria 15 minitra fotsiny ny seranam-piaramanidina Reagan, raha 45 minitra kosa ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Dulles. Ity toerana tena mahasoa ity dia mahasoa ny mpivarotra sy ny mpanao dia lavitra.
Nisondrotra rihana 12 ny olom-pirenena vaovao Washington DC Capitol, manana efitrano fandraisam-bahiny 252, efitrano fivoriana fito misy fiaraha-monina miisa fito, ary bara an-tampon'ny cloudM miaraka amina teras ivelany ivelany - izany rehetra izany dia namboarin'ny beton Amsterdam ary nomen'i Vitra, samy mpiara-miasa maharitra amin'ny olom-pirenenaM.
Miorina amin'ny filozofian'ny 'rindrina banga dia fotoana very maina' ny citizenM, nofonosin'i Erik Parker ny endrika hotely - mpanakanto monina any New York fantatra amin'ny kanto noforoniny avy amin'ny zana-kolontsaina amerikana. Avy amin'ny ambaratonga an-dalambe dia efa ampidirina amin'ny tontolo miloko misy olom-pirenenaM. Ao anatiny, ny asan'ny mpanakanto JD Deardourff ao an-toerana dia mandravaka ny rindrin'ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny valindrihana miaraka amin'ny sonia fandokoana loko-loko sy ny endrika apokaliptika. Voajanahary ho an'ny olom-pirenenaM ny manampy vazivazy, mampiseho sary miendrika hipster nataon'ny filoha teo aloha nataon'ny mpanakanto Amit Shimoni. Ny sary dia ampahany amin'ny tetikasany 'Hipstory' izay ahitàna olo-malaza 50 (ao anatin'izany ny filoha Donald Trump) ho hipsters ankehitriny.
Ny sanganasa ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny dia misaintsaina ara-politika ihany koa amin'ny sangan'asan'ny mpanakanto STABLE Damon Arhos, Matthew Mann, Andy Yoder ary Melvin Nesbitt. Ny tsirairay amin'ireo mpanakanto teraka amerikanina ireo dia samy mamorona asa miorina amin'ny strukturalma matanjaka - miainga amin'ny kolontsaina marolafy sy ny fikatrohana ara-tsosialy, hatramin'ny kolontsain'ny mpanjifa ary ny krizy amin'ny tontolo iainana.
Ny torimaso ao amin'ny citizenM dia azo antoka sy mora noho ny haitao namboarina tamim-pahakingana - misy fijanonana tsy misy fifandraisana izao any amin'ny hotely citizenM rehetra amin'ny alalàn'ny fampiharana vaovao mamaky ny tany izay natomboka tamin'ny Jolay 2020. Afaka mitsidika, mivoaka, manokatra varavarana, manafatra sakafo, mifehy ny ambiansy ny efitrano ary mandoa vola amin'ny fividianana nefa tsy mikasika afa-tsy ny finday finday manokana.
Taorinan'ny fahombiazan'ny fijanonana tsy misy fifandraisana, ny marika fomba fiaina vao haingana dia nanangana hetsika roa hafa manerana ny trano fandraisam-bahiny 21: pasipaoro manerantany amin'ny alàlan'ny citizenM sy ny fisoratana anarana ataon'ny citizenM Pasipaoro manerantany ataon'ny olom-pirenenaM dia safidy fijanonana maharitra ho an'ireo mpifindrafindra nomerika izay te-hiasa / miaina / fitsangatsanganana na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao, miaraka amin'ny fahalalahana farany hanapa-kevitra isam-bolana.
Ny famandrihana orinasa avy amin'ny citizenM dia fonosana matory-miasa-mifanena matotra ho an'ireo orinasa manana mpiasa lavitra izay mandeha matetika.
Ato ho ato, ny olom-pirenenaM dia handray ny fananana Washington DC faharoa ao amin'ny distrikan'i NoMa - citizenM Washington DC NoMa - miaraka amina fanalahidy 292. Amin'ny 2025, ny olom-pirenenaM dia hanana fananana manodidina ny 40 manerantany (misokatra na amin'ny fampandrosoana), mihoatra ny avo roa heny ny portfolio-ny ankehitriny. Ny fizahan-tany amerikana avaratra dia misy hotely ho avy any Miami, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Boston ary Seattle.